Danish Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(655 mavhoti, avhareji: 4.00 kubva 5)
Loading ...Kubva 1948, muDenmark, paive nehutongi mumunda wekubhejera, uyo waive wekambani yenyika pasi pezita reDanske Spil. Hazvishamisi kuti nyika yakabudirira munzvimbo dzepasi pekubhejera, asi mu1990 muDenmark, paive nemutemo wekasino. Kunyangwe Danske Spil achiri achiramba ari oga pamarotari nemujaho wemabhiza, kumhanyisa greyhound, uye kumhanya kwenjiva, kurongeka kweimwe vidiv kubhejera kwakawanikwa kumakambani akazvimirira, asi nekumwe kusakwana: makambani ekunze anogona kuvhura kasino munyika kungogadzira mubatanidzwa wekambani pamwe neDanish mudiwa, semuenzaniso, muridzi wepfuma.
Zivai kune vashanyi kune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori kuti parizvino, ese marudzi ekubhejera kuDenmark anoonekwa sepamutemo. Mutemo wekubhejera kuDenmark wakaraira mirau yese yekushanda kwemusika weDanish wekubhejera. Chengetedza kuitwa kwemutemo uyu, uye zvakare unobata nenyaya dzekubheja marezinesi Iyo Danish Kubhejera (Spillemyndigheden).
Pamberi yeMari kuDenmark
Ndira 1, 2012 yaive nguva yekuchinja munhoroondo yekubhejera pamhepo muDenmark. Kubva musi iwoyo wakatanga kushanda mutemo mutsva unodzora kubhejera munyika. Kunyangwe paine chokwadi chekuti Danske Spil yakachengetedza hunyanzvi hwedzimwe mhando dzekubhejera, makambani akazvimirira uye vanhu vakave nzvimbo dzekutengesa marezinesi online kubhejera kuDenmark, kunyanya kubheja kwepamhepo pamasaiti emitambo uye pamhepo kasino nzvimbo. Zvinoenderana nemutemo uri online kubhejera kuDenmark, kune wekunze opareja kubhejera anogona kupa masevhisi ekubhejera pamhepo munyika, zvinoda kutora bvunzo uye kuwana rezinesi kuDenmark, pamwe nekubhadhara imwe mari.
Nechekare mugore rekutanga rekupinda musimba kwerezinesi nyowani remutemo rakatambira makumi maviri neshanu vanopa makasino epamhepo, kusanganisira vamwe vevanotungamira vekunze vanoita se25, Bwin neLadbrokes. Panguva imwecheteyo, Hurumende inogara iri muhondo yekurwisa nzvimbo dzisiri pamutemo dzekubhejera nzvimbo kuDenmark, idzo dzinoiswa pamazita uye kuvharirwa.
Rwokutanga rweChitamende yeChitamende yepamusoro Online Casino Sites
Denmark Scandinavia inonzi parera haisi izvi chete: nzvimbo diki yenyika huwandu hwezvisikwa uye nhoroondo hupfumi hunongopfuura. SasinoToplists vanokuudza nezve akakosha maficha eDenmark, pamwe nemafungiro evaDanes kubhejera.
Denmark - zvishoma zvejogirafi uye nhoroondo;
Nhasi-based casinos munyika panguva ino:
Makambani ekune dzimwe nyika anofanira kuva nechechi yekambani mumasangano ekubhejera mitambo;
Mutambo wokupinda kuCasino.
Casino Nyika nhatu dziri muAalborg, Orhusskae, Clamps, Odense, Helsingor uye, zvechokwadi, muguta guru, Copenhagen;
Zvinhu zvishanu zveCopenhagen guta guru reDenmark nemakero;
Chokwadi chinofadza pamusoro peDenmark uye kumaDanes.
Nzvimbo yeDenmark uye zvinyorwa zvinyorwa zvekare
Denmark inonzi Kingdom yeDenmark ndeyechokwadi. Iyo nyika iri kuchamhembe kweEurope uye iri yekumaodzanyemba kwenyika dzeScandinavia. Nyika iri pachiwi cheJutland uye pazvitsuwa zvidiki zvezvitsuwa, uye zvakare inosanganisira Faroe Islands neGreenland.
Denmark kusvika parizvino yakaramba iri humambo hwebumbiro remitemo, uye zvinofanirwa kucherechedzwa panguva iyo nyika yaive hushe hwakasimba - kusvika muzana ramakore rechi19 madzimambo eDenmark "akabata chibhakera chake," iyo yese yekuchamhembe kweEurope. Zvino izvo Faroe Islands neGreenland vane mwero wakakwirira wekusununguka uye kuzvitonga. Kubva 1972, iyo Danish inotonga iyo 54-th mambokadzi anonzi Margrethe II.
Casinos uye Kubheja muDenmark
Kurovedzwa kwema casinos munyika kwakaitika mu1990 uye mairi makaisa hwaro hwaro rezinesi revashandisi vekunze. Mamiriro akakosha ekupihwa rezinesi - wekunze anoshanda ekubhejera masevhisi kugadzira kambani yeDenmark pamwe chete nekambani iripo yeDanish. Nzira yakanyanya nyore yekugadzira kudyidzana kwakadai pazasi peimwe yehotera, zvinova ndizvo zvakaitika.
Vanoenderana zvizere nedanho reDanish vanogona vanoshanda se "Holland Casino" vanobva kuNetherlands yakavakidzana, "Bad Neuenahr" anobva kuGerman, "Casinos Austria" kubva kuAustria. Mutero wepamusoro mudunhu wakakwira, zvinoenderana nemari yekasino iyo inotangira kubva ku45% yemitero yegore.
Parizvino, nyika ine 6 makasino makuru. Ivo vari muAalborg, Orhusskae, Clamp, Odense, Helsingor uye, zvechokwadi, muguta guru, Copenhagen.
Casino Copenhagen. Mitemo yakajairika mukasino inosangana neEuropean kasino inotanga na14.00 uye inopera na4.00. Kushanyira kasino kunogona kungova pazera remakore gumi nemasere, saka unofanirwa kuve nepasipoti.
Imwe nuance - pamusuwo iwe unobvunzwa kubhadhara mari yekupinda. Tikiti rezuva rinodhura 95 Danish kroner (ingangoita € 12), vhiki imwe - 265, uye mugore 2.095 DKK. Muzhizha, iwe unogona kushanyira kasino muzvipfupi uye nesimbi, asi mbatya dzemitambo pano hadzigamuchirwe.
Panguva iyo mutambo we poker mukasino haufanire kupfeka magirazi, shandisa iyo iPod uye kupfeka t-shirts pasina maoko. Asi panguva yepasirese poker senge WPT uye mimwe mikuru mirau yemitemo ine chekuita nekuonekwa kweimwe demokrasi.
Pakazara, makasino muCopenhagen anozivikanwa kwazvo uye mune kudiwa kukuru. Iine zvese izvo zvingangoshuvira mweya wemubhejera: Roulette (European neAmerican), ese marudzi emuchina wekubhejera (140 sarudzo), matafura e poker, blackjack, uye Punto yeBanco.
Kunze kwekufamba kwepamusoro mukati meguta nechetsika yekuongorora Horo, pedyo nemativi, uye chikumbaridzo kune Little Mermaid, Copenhagen inopa kutarisa uye zvinonakidza zvinofadza.
miziyamu "Tenda Izvo Kana Kwete!". Address: the R å dhuspladsen , 57. Mune ino miziyamu isina kujairika pasi pechiratidzo chinonakidza "Tenda icho kana kusatenda icho!" Iko kuunganidza Leroy Ripley - mufambi uye muteresi. Kwemakore, mazana enzendo kutenderera pasirese akaunganidza zvinhu zvakawanda zvinoshamisa. Pano iwe unowana unowirirana neTaj Mahal, iyo skeleton yemammmoth, rudimbwa, ichitamba isina tambo uye kunyangwe gungwa zvinongoseka.
Museum ye "Experimentarium". Kero: Tuborg Havnevej, 7, Hellerup. Kana iwe urikufamba nevana kana uchingoda kunzwisisa iwo ese akafanana mitemo yepanyama - inongova nzvimbo yakanaka. Iko kune polygraph muchina wekudaidza dutu uye kudengenyeka kwenyika, nezvimwe zvakawanda zvinokwezva. Zviratidzo zvese zvinogona kubatika.
Museum "Guinness". Kero: Østergade 16. Iyi miziyamu haidi sumo, seGuinness zvinyorwa pamusoro pevanhu vese vanoziva. Asi kana iwe ukaverenga chingangoita chero chinyorwa, dzimwe nguva zvakaoma kwazvo kufungidzira. Pano unogona kuwana zvinopfuura mazana mashanu emiratidziro yezvinyorwa zvinonakidza kwazvo, uye "kuratidzwa Mystic Exploratorie » iwe unogona kubata mumvuri wako, shandura misoro pamwe nechepamusoro wekugara munhu uye kunyange kugara muchigaro chegesi.
Paki "Tivoli" mafaro. Kero: Vesterbrogade 3. Iyi paki yekuvaraidza ndiyo dangwe pasirese uye, nenzira, akafuridzira kamwe Walt Disney kugadzira Disneyland network. Iko hakuna supernavorochennogo zvinokwezva, asi kune inodziya nharaunda yekupembera uye mufaro.
"Erotica" miziyamu. Kero: Kobmagergade 24. Iyi ndiyo miziyamu yekutanga yekukwezva munyika, akaonekwa muna 1992. Pano unogona kutsvaga nhoroondo yemafungiro nezve eroticism kubva kuRoma yekare neIndia kusvika nhasi. Iko kune kupenda, zvivezwa, mifananidzo uye mavhidhiyo, pamwe neanoshoreka mbichana uye ese marudzi emidziyo kubva kusadomasochistic nzira. Kupinda kwezvikonzero zviri pachena, nemakore gumi nemasere, asi vadzidzi vane dhisikaundi ye18%.
Chokwadi chinofadza pamusoro peDenmark uye kumaDanes
Zuva rekushanda rinotanga mangwanani - kutanga senge 8 am, maDanes anoenda kubasa, uye na16.00 vakasunungurwa. Zvitoro zvakare zvakavhara mangwanani-ngwanani, saka maDanes akagadzira zvigadzirwa zvikuru zvakatengwa mukupera kwesvondo;
Denmark ine mutero wakakwira kwazvo - avhareji ye43%. Zvinoenderana padanho remari yemugari uye nezve mabhenefiti akafanira kwaari;
Kubasa, Dane yega yega inowana kudya katatu pazuva. Mushandirapamwe weDanish, kambani kana sangano pachinyakare rine imba yayo yekudyira uye vanobika;
Danish varume vanoita basa repamba zvakaenzana nevakadzi. Vanoshambidza uriri, vanochengeta vana uye havafungi kubika chinhu chinonaka.
Zvivakwa muDenmark zvakadhura uye nekudaro kazhinji zvine hutsinye. Makona emadziro, uye dzimwe nguva kusanyanya kuronga kuri kuitika mudzimba zhinji.
MuDenmark, kurapwa kwemahara, panguva imwechete kune mumwe nemumwe chiremba wemhuri akabatanidza imwe nhamba yevarwere. Izvi zvinoitwa padanho renzvimbo, uye kana uchizofamba, uyezve chiremba anozofanira kuchinja;
Denmark - Bhasikoro nyika. Ivo vanodiwa zvikuru uye vanokosheswa.
Denmark pamepu yeEurope
Kubhejera mumakadhi kuDenmark
Pamuenzaniso weDenmark, unogona kuona kuti ndeipi nzira inofanirwa kutevera, kana basa racho riri rekugadzira indasitiri inokwezva yekubhejera. MaDanes, kunyangwe aine hunyoro hwakadzikama, haana basa nekupedza nguva mukasino, uye nekuda kweizvozvo vane mukana wese.
Hatigone kutaura kana kasino kuDenmark, pamatanho ese, hazvisi. Nyika ine vashandisi vanomwe chete avo mutongi akapa marezinesi, uye zvikumbiro zviviri zvakamirira. Nekudaro, kunyangwe iyo kasino, ndiko kuti, yakakwana kugutsa zvido zvekubhejera zvevaDanes. Nenzira, muDenmark, imomo kune vanhu vangangosvika mamirioni mashanu, uye kasino kasere kashoma kutsungirira kuwanda kwevashanyi. Uye kana iwe uine rombo rakanaka zvekushanyira nyika ino yakanaka, ita shuwa yekushanyira imwe yeiyo kasino. Kubhejera zvivakwa zvinowanzo kuve munzvimbo yezvakaitika kare, chivakwa chehotera, uye chinonakidza kunyangwe kungoshanya.
MuAarhus, iro guta rechipiri pakukura muDenmark, rinoshanda imwe yeakanakisa Danish kasino. Iyo inozivikanwa kwete chete kune yayo yakanakisa zvemukati, asi zvakare mhando yebasa. Chivako ichi chiri zvakare uye yakasarudzika hotera Royal Royal, iyo inoda kugara vane mukurumbira uye vakapfuma vanhu. Munzvimbo yehotera kune akawanda masayiti enhoroondo. Iko kune zvakare inozivikanwa uye yeLatin Quarter ine yayo nzizi cafes uye zvitoro.
Kana iri yemitambo iripo mukasino inowanikwa mashoma matafura ekubheja pane roulette, blackjack uye poker majee. Mumahoro iwe unogona kuwana makumi masere-emhando yekutanga michina. Kazhinji madziro ecasino anotamba makwikwi makuru epoker.
Iyo inokwezva Denmark, ichokwadi chekuti rimwe nerimwe reguta rayo, uye kwete chete guta guru, rinokwanisa kutora vashanyi. Mumwe angafungidzira kuti macasino ese ari muCopenhagen, asi hazvisi. Imwe yeakanakisa kubhejera inoshanda zvinobudirira muguta reAalborg. Kasino kasino kanodiwa kari muchivako chehotera munzvimbo yepakati peguta nekukomba nguva dzose izere nehupenyu. Makirabhu mazhinji, inodziya maabhu uye maresitorendi madiki haazofinha mafeni ehusiku husiku. Mukasino unogona kutamba mhando dzinoverengeka dze roulette, poker uye mimwe mitambo yemakadhi. Zvakare inowanikwa munzvimbo dzinopfuura makumi matatu slots, kusanganisira zvinofambira mberi jackpots.
Nekudaro, kasino huru yeDenmark iri muguta rayo. Yakavhurwa mu1990 pamusi wegore Idzva uye yaive yekutanga kubhejera zviri pamutemo munyika. Kana iwe uchida sarudzo yepamusoro yecasino varaidzo, saka unofanirwa kutanga kuitsvaga kuCopenhagen. Akawanda akati wandei emitambo matafura uye anopfuura zana zana slots anotendera kuti uwane mutambo kwaunoda. Nenzira, zviitiko zvikuru zve poker zvinowanzo kuve zvakarongedzwa mukati memadziro eichi institution. Casino inogara mune imwe yepamusoro hoteli Radisson Blu Scandinavia capital.
Izvi zvakawanikwa zvinogona kutsanangurwa nenyaya yekuti huwandu hwevaDenmark hupfupi maawa ekushanda, asi, zvakadaro, avhareji nhanho yemari - yakanyanya pasirese.
Inoratidzika semufananidzo wekubudirira (kana uripo zvachose), asi vaDanes havana kushandisa nguva yavo yose yekusununguka kwekuunganidza Lego.
Vanhu vane mari yepamusoro munyika ino vanoita kuti kuwedzerwa kwakanyanya mukudhura kwekubhejera paIndaneti.
Asati aJanuary 1, 2012 iyo yehurumende Danske Spil ndiye aive muridzi wesangano uye achiita mareti. Mamwe ese emakambani eDenmark nekune dzimwe nyika aisabvumidzwa kupa kubhejera varaidzo nekutamba mitambo. Asi hurumende yemuno yakamanikidzwa kuchinja mamiriro ezvinhu aya, nekuti mutemo haushande nemazvo, uye anopfuura mawebhusaiti mazana mana ekubhejera mitambo kutora mabheti kubva kumaDanes. Zvakawanda zviwanikwa zvinotopihwa mutauro weDanish kuti zvive nyore kune vashandisi kubheja maitiro.
Mitemo mitsva inobvumidza kupa masevhisi ayo kumakambani akadai seLadbrokes uye iyo bet365, kunyange hazvo nyika yakachengeta monopoly pakubhejera kumarudzi emhuka nekubhejera, ayo akavakirwa pamhanza yakanaka. Inoreva mitambo yakadai sekukara makadhi uye bingo, uko mutambi asingashandise zano kana hunyanzvi uye achivimba chete pane dzimwe nguva.
Kunyangwe kurasikirwa nekodzero dzega dzekuronga uye kuitisa kubheja kambani Danske Spil mari yakawedzera zvakanyanya mushure mekushandurwa kwemutemo, uye ikozvino yakakamurwa kuita makambani maviri: Danske Lotteri Spil uye Danske Licens Spil. Iyo yekupedzisira inovhara pamhepo chikamu chemitambo uye ichangobva kunyora kuwedzera kwemari ne60% zvichienzaniswa negore rapfuura.
Nhasi, maDanes ane mikana yakawanda yekubhejera. Ivo vanogona kutamba mitambo yakadai online poker kurwisa vamwe vatambi kutenderera pasirese. Asi hurumende yeDenmark inoshanda zvine mutsindo kumakambani ekushambadza uye ekupa marezinesi ari kunze kwenyika anotongwa nemitemo yakaoma.
Kufanana nevazhinji vekuEurope, maDanes anoda nhabvu uye anoisa yakawanda yechikwata cheSuper League timu. Iyo English Premier League zvakare inozivikanwa zvakanyanya nekuda kwekuti inowanzo kuratidzwa paDanish Satellite (maDanes anogona kuona mazana maviri nemakumi matatu emakumi matatu emitambo pamwaka).
Munguva pfupi yapfuura, kuwedzera kufarira gorofu, kunyanya nekuda kwekubudirira kwaThomas Bern. Mudiki mutambi Torbjörn Olesen, sezviri pachena, achabatsira mukufarira kwevateveri. Handball uye badminton vakawana kubudirira kwakasimba, pamwe neiye wepasirose-bhasikoro akahwina mibairo mumakwikwi ebhasikoro "Tour de France".
MaDanes zvakare akapindwa muropa ne poker. online poker's mukurumbira yakatanga kukura nekukurumidza mushure mekukunda mumakwikwi epoker Gus Hansen mukutanga 2000s. MuDenmark, yakawanda yevatambi poker, nyika iri pamakumi maviri neshanu pasiteji yepasi rose WSOP. Kubhejera Nharaunda Denmark inoda nguva-yakaedzwa poker saiti senge Party Poker.
Nguva yemberi yekubheja muDenmark
Kubhejera muDenmark kwakatanga kukura nekukurumidza mushure mekuunzwa kwemitemo mitsva mari yegore rapfuura yemubato wekubhejera yakasvika mabhiriyoni mana DKK.
Nekudaro, iyo hurumende iri kuita zvese zvinobvira kudzivirira vasina marezinesi ekunze ekubhejera mawebhusaiti anopa mabasa kumaDanes Izvi zvakatungamira kuchokwadi kuti chete muna2012, 57 masayiti akanyorwa mune yakasarudzika mazita.
Hazvishamisi kuti, mushure memakumi emakore ehumambo hwekubhejera muDenmark, kambani yeDanske Spil ichiri yavo 62% yemusika. Zvinogona kutora chinguva vamwe vatambi vasati vakwanisa kukwikwidza nabhuki, avo masevhisi avo anoshandiswa kushandisa ruzhinji rwevaDenmark.
0.1 Pamberi yeMari kuDenmark
0.2 Rwokutanga rweChitamende yeChitamende yepamusoro Online Casino Sites
3 Kubhejera kuDenmark
3.0.1 Nzvimbo yeDenmark uye zvinyorwa zvinyorwa zvekare
3.1 Casinos uye Kubheja muDenmark
3.1.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peDenmark uye kumaDanes
3.1.3 Denmark pamepu yeEurope
4 Kubhejera mumakadhi kuDenmark
4.1 Royal Scandinavia
5 Kubhejera kuDenmark
5.0.2 Misika yakakurumbira
5.0.3 Nguva yemberi yekubheja muDenmark
delaware lotto kutamba 3